Raw Noopept Powder (157115-85-0) Ndị na-emepụta - Phcoker Chemical
Noopept ntụ ntụ a Nootropic molekul yiri Piracetam. Noopept ntụ ntụ nwere mmetụta yiri nke piracetam ntụ ntụ, na ọ na-enye dị nro …… ..
ikike: 1245kg / ọnwa
Raw Noopept ntụ ntụ (157115-85-0) video
Raw Noopept ntụ ntụ (157115-85-0) Nkọwa
Raw Noopept powder bụ nkwalite ntụgharị uche nke na-arụ ọrụ dị mma karịa Piracetam na-emeso mmetụta mmetụta uche mgbe ụbụrụ vascular ma ọ bụ traumatic ụbụrụ merụrụ ahụ.
Onye na-eme ka ihe ntụgharị uche bụ Raw Noopept powder (N-phenylacetyl-L-prolylglycine ethyl ester) dị gburugburu 1000 ugboro ike karịa piracetam. Piracetam na-eme ka mmalite nke usoro ncheta dị elu, ebe Raw Noopept ntụpụ na-eme ka ọnọdụ nchekwa na mgbapụta nke nchekwa dị mma. Ọ bụ mgbochi nchegbu, antioxidant, mgbochi mkpali, ma gbochie neurotoxicity site na amyloid ngafe mgbe ọ na-eme ka ọbara na-efe efe.Ọ na-enyere aka na ezigbo ụra abalị, mgbakasị, ụra, isi ọwụwa, na inwe ike dị mkpa iji na-ụbọchị. Ọ na-enye aka na nchekasị, ncheta, na nrụgide.
Raw Noopept ntụ ntụ (157115-85-0) S.mmezi
Product Name Raw Noopept ntụ ntụ
Chemical Aha N-phenylacetyl-L-prolylglycine ethyl ester, GVS-111
Brand Name Raw Noopept ntụ ntụ
Klaasị ọgwụ ọjọọ Nootropic
molekụla Fnhazi C17H22N2O4
molekụla Wasatọ 318.373 g / mol
Nkịtị Monoisotopic 318.37
Mgbu Point 97 ° C-98 ° C
Ọkara Ndụ nke Ndụ 30-60 nkeji
Sume Raw Noopept ntụ ntụ bụ isi mmiri na-soluble nootropic, mana ọ gaghị adị mfe ịgbari na mmiri ma ọ bụ ihe ọ juiceụ juiceụ.
Sịkwa akwa Tigwe Na-echekwa na ebe mmiri kpọrọ nkụ na okpomọkụ adịghị elu karịa 25 Celsius C. Kpachara ụmụaka anya.
Antinye Na-echekwa ebe nchekwa na-adịghị mma, anya na arụmọrụ ndị ọzọ na-achọgharị uche yana nsogbu nsogbu nke labile.
Noopept (GVS-111) bu aha aha maka N-phenylacetyl-L-prolylglycine ethyl ester, ihe omimi nootropic molecule.
A na-enwekarị mgbagwoju anya dị ka akụkụ nke ezinụlọ racetam, ọ dịghị onye na-ahụ anya bụ peptide nootropic pụrụ iche nke mepụtara na Russia iji mesoo afọ ojuju nke afọ. Taa, ndị okenye na ndị na-eto eto na-eto eto na-ejikarị ya eme ihe, ọ ghọwokwa otu n'ime ọgwụ ndị dị egwu na-ewu ewu ugbu a.
Enweghị ike igbochi akụrụngwa na-eme ka ọgwụ ọjọọ dị ike karịa piracetam na ọgwụ ndị ọzọ na-emepụta ọgwụ ọjọọ, enweghi ike iji ọgwụ ọgwụ eme ihe maka ọgwụgwọ ọrịa Alzheimer, nkwarụ, na afọ ndị ọzọ dịka Russia na mbụ Soviet Union.
Noopept enwewo ọganihu n'ime iri afọ abụọ gara aga ma ugbu a bụ otu n'ime ndị na-enweghị atụ na-atụ aro na obodo.
Noopept ntụ ntụ (157115-85-0) Ime ihe
Noopept nwere usoro ihe eji eme ihe. Mmetụta nootropic nke ọgwụ na-agbasa site na otu n'ime metabolites na-arụsi ọrụ ike (cycloprolylglycine) yiri nke ahụ na usoro nke dipeptide cyclic dị egwu na ọrụ amnesic Emeela ka o doo anya na ọgwụ na-abawanye nkwupụta nke NGF na BDNF na hippocampus, na-egosipụta akụrụngwa dị mma na akparamagwa na akwara ozi, na-ebelata nrụgide oxidative ma bulie ọrụ nke sistemụ antioxidant, ma na-egbochi pasePSA / JNK na pERK1. Noopept na - eme ka ncheta dịkwuo mma site na ịgbalite kemịkal ụbụrụ akpọrọ BDNF yana site na ụzọ ndị ọzọ.
uru nke Noopept ntụ ntụ (157115-85-0)
Noopept meziwanye arụmọrụ na nchekwa
Noopept wepụ Brain Fog
Noopept enyere aka na nchegbu
Noopept nwere ike inye aka na Alzheimer
Na-atụ aro Noopept ntụ ntụ (157115-85-0) Ọgwụgwọ
Noopept nwere nkwụsị nke dị ala karị karịa piracetam (4800mg), ihe ntinye ọgwụ maka noopept bụ 10-30mg.
Dị ka otu nnyocha si kwuo, ntụpọ na-enweghị ike bụ 1000 ugboro karịa karịa piracetam, nke bụ ya mere usoro ọgwụgwọ a tụrụ aro ya ji dị mma.
mmetụta nke Noopept ntụ ntụ (157115-85-0)
Mmetụta dị iche iche nke Noopept ntụ ntụ dị nwayọọ ma ọtụtụ ndị ọrụ anaghị enwe mmetụta ọ bụla ma ọlị. Mmetụta mmetụta ole na ole na-adị, mana ọ bụrụ na ị were nootropic a karịa oke ọ nwere ike ibute isi ọwụwa, ike ọgwụgwụ, ọgbụgbọ na ehighị ụra nke ọma.
Ntuziaka Noopept: Gịnị Nwere Noopept Ga-eme Gị?